7 Arrimood Oo Halis Weyn Oo Caafimaad Darro Ku Ah Haweenka Dalkeenna! - Hablaha Media Network
HMN:- Ilaalinta caafimaadku waa arrin waajib ku ah qof kasta noloshiisa ha ahaato ama tan uu masuulka ka yahaye. Ilaahay SWT mar walba waxa aynu waydiisanaa Caafimaad iyo nolol wanaagsan waxaana muhiim ah in Caafimaadka Alle SWT ku siiyay aad ilaaliso oo aad ku dadaasho ka fogaanshaha wixii dhibaato Caafimaad darro kugu keenaya. Waxa jira Cudurro aad gacantaada ku doonato iyada oo qadarka Alle SWT mar kasta jiro oo aynu Rumaysanahay. Qormadan kooban waxa aynu soo qaadan doonaa 7 qodob oo Halis weyn ku ah Caafimaadka Haweenka, kuwaasi oo loo baahan yahay in Haweenaydu si weyn Isaga Dhawrto si ay u Ilaashato Caafimaadka Rabbi SWT ku Galladay. Toddobadan Arrimood waxa ay kala yihiin: